-eme ugbu a
na-eso ụzọ: 38461
11 nkeji gara aga
Naanị ebe Rama X. nwere ike ịgbapụ n’ọdịdị oge niile
#intothenight. N'ihi na ebe ọ bụla eze bi, ndị mmadụ agaghị anabata ya. Oge ya agwụla. Oge eruola ka o mee ka Thailand nwere onwe ya, ọ ga - emecha nweta #democracy ✊👉 https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/JZXmYCxxo6
Lee na Twitter
วาน นี้ ไป ไป เพื่อ กดขี่ ข่มเหง ผู้ https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/FCC9hGPddi
Daynyaahụ eze ahụ na-efe efe nke enweghị oke. Ọ ga-eji ịbụ onye na-enweghị nkatọ na Europe. N’agbanyeghi ebe o jere anyi n’eso ya. Ka ego eze na-emefu ntaramahụhụ na mmegbu, ndị isi ojii ọzọ na-achọ ịkwatu ya. 👉✊🦇 https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/Un6Upkir1v
Ajụjụ ọnụ onye guzobere Oliver Bienkowski @Lightartist si @PixelHELPER na Jom Petchpradab banyere mkpọsa megide Thai King #RamaX. Anyị na-achọ #whistleblowers nwere ihe omuma iji tinye Rama n’ihu Criminallọikpe Ikpe Etiti na Hague!
Yom Petchpradab chọrọ ajụjụ ọnụ @Lightartist onye guzobere otu ndi ochichi @PixelHELPER. #PixelHELPER hazie ngagharị iwe na Germany megide King Vajiralogkorn. Kwesịrị ikiri elekere ise nke abalị taa Youtube: https://t.co/MS8ky4uSs6 - kwado anyị #Crowdfunding https://t.co/RutMPz4U74 https://t.co/maFHLtuZkr
Anyị ga-eji nwa bebi a jikọtara ya na ndị ohu, ndị isi, ndị uwe ojii, ekwensu & ụmụ bebi ndị ọzọ iji gosi nsogbu nke Thailand na vidiyo na-egwu egwu. Art na-ewetara ndị ọchịchị aka ike. Tokwesịrị ịchị ọchịchị ọchị ma kpọọ mmejọ ya ụzọ tupu ndị mmadụ akwatuo ya! #democracy https://t.co/McVgVrNUcJ
เรา @PixelHELPER https://t.co/vLlmuKlbwh ชรา ผู้ ผู้ จาก # ประเทศไทย ที่ จะ เสรี เสรี มา https://t.co/Yuaa4FcKdr
เรา @PixelHELPER https://t.co/vLlmuKlbwh ชรา ผู้ ผู้ จาก # ประเทศไทย ที่ จะ เสรี เสรี มา https://t.co/7V1LBhfute
nkwado @PixelHELPER https://t.co/vLlmuKlbwh A agadi & ọgaranya eze si #Thailand chọrọ ịnọ na Europe. Ọ bụghị onye maara ihe, daa n'elu ụdọ, yabụ njem ahụ akabeghị. Lee ya anya, ọ na-ezuru ụmụ amaala thai! Anyị na-alụ ọgụ onye ọchịchị aka ike nke na-azọ gị ụkwụ. ịlụ ọgụ https://t.co/PpVQ6o4vVm
nkwado @PixelHELPER https://t.co/vLlmuKlbwh A agadi & ọgaranya eze si #Thailand chọrọ ịnọ na Europe. Ọ bụghị onye maara ihe, daa n'elu ụdọ, yabụ njem ahụ akabeghị. Lee ya anya, ọ na-ezuru ụmụ amaala thai! Anyị na-alụ ọgụ onye ọchịchị aka ike nke na-azọ gị ụkwụ. ịlụ ọgụ https://t.co/l2qgCVg2EB
Punch na Judy Gosi gosipụtara ya. หุ่น มือ กษัตริย์ ใน Yใน ในใน ใน ใน Youtube ไม่ ไม่ ใน ใน ใน ใน Youtube ใน ว่า กษัตริย์ ใน ใน ใน ใน ใน https://t.co/n4oCVdPSHw https://t.co/MpKgyn0Hoz
Omume, mee ka anyị bụ mmadụ. Know mara ihe nke ahụ pụtara? Anyi gha akuziri eze ihe. Anyị achọọ ịchọrọ twitter n'akụkụ ebe a ụbọchị dum? Ma ọ bụ chọọ ka anyị na-alụ ọgụ maka Maha Vajiralongkorn #Junta ọchịchị? Kwado anyị #crowdfunding ugbu a https://t.co/n4oCVdPSHw https://t.co/fakXSEVAeG
Punch na Judy Gosi gosipụtara ya. หุ่น มือ กษัตริย์ ใน Yใน ในใน ใน ใน Youtube ไม่ ไม่ ใน ใน ใน ใน Youtube ใน ว่า กษัตริย์ ใน ใน ใน ใน ใน https://t.co/vLlmuKlbwh https://t.co/O4WXWm1JKE
Ndụ Thailand abụghị ugbo pony, mana ọmarịcha akara aka na Judy gosipụtara. A na-eji nwa bebi aka eze iji gosipụta eziokwu siri ike nke na-enweghị onye ọzọ nwere ike ikwu banyere ya na vidiyo YouTube. Agbanyeghị ebe eze na-aga n'ụwa ka ụmụ bebi anyị na-eso ya. 👉✊ https://t.co/n4oCVdPSHw https://t.co/1JaMhqR8FQ
กษัตริย์ ไทย ถูก หวย หวย unch unch Punch na Judy gosiputara ได้ ที่ ที่ นี่ ego na Judy gosiputara ได้ ที่ นี่ https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษต ร # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/UwVzUtkxd3 https://t.co/7ziYF81hJZ
กษัตริย์ ไทย ถูก หวย หวย unch unch Punch na Judy gosiputara ได้ ที่ ที่ นี่ ego na Judy gosiputara ได้ ที่ นี่ https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษต ร # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/UwVzUtkxd3 https://t.co/eJzoBI0CNv
Nwa eze Thai meriri lọtrị nwa. Ọ bụghị chi. Ọ na-emekpa ndị mmadụ ahụhụ ma na-atụba ụmụ nwanyị n'ụlọ mkpọrọ. Can nwere ike ịhụ ka esi ewu nwa nkịta eze. Kwado Punch na Judy anyị gosipụtara site na iji onyinye ego nye Thai Defender Defender Fund https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/W4bp3apOx6
Nwa eze Thai meriri lọtrị nwa. Ọ bụghị chi. Ọ na-emekpa ndị mmadụ ahụhụ ma na-atụba ụmụ nwanyị n'ụlọ mkpọrọ. Can nwere ike ịhụ ka esi ewu nwa nkịta eze. Kwado Punch na Judy anyị gosipụtara site na iji onyinye ego nye Thai Defender Defender Fund https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/NgunYifJsP
กษัตริย์ ไทย ถูก หวย หวย unch unch Punch na Judy gosiputara ได้ ที่ ที่ นี่ ego na Judy gosiputara ได้ ที่ นี่ https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษต ร # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/UwVzUtkxd3
Nwa eze Thai meriri lọtrị nwa. Ọ bụghị chi. Ọ na-emekpa ndị mmadụ ahụhụ ma na-atụba ụmụ nwanyị n'ụlọ mkpọrọ. Can nwere ike ịhụ ka esi ewu nwa nkịta eze. Kwado Punch na Judy anyị gosipụtara na inye onyinye ego maka Thai Defender Fund https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/cfNQkLKgFv
A ga-ekpochapụ Iwu mkparị nke Thai na mpako 112. Thaiking ga-agbadata ma kpochapụ ụzọ maka ịme ntuli aka onye kwuo uche ya. "Ha nwere ike wepụ ndụ anyị, mana ha agaghị anabataghị nnwere onwe anyị!" kwuru @Lightartist, Ntọala nke @PixelHELPER Kwado anyị: https://t.co/KC20BMakED https://t.co/vPqUr8FbBE
ฉาย แสง ระบอบ ระบอบ ระบอบ ระบอบ ระบอบ ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ระบอบ ระบอบ # ลก ขึ้น # ลก ขึ้น สู้ ประชาธิปไตย # พระราม 10 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/VRcLwXkHPg
เรา ฉาย แสง การ์ตูน “คิง ถูก ฟ้าผ่า ฟ้าผ่า พร้อม ข้อความ 112 ช่วย ชีวิต ชีวิต ช่วย คือ 112 คือ กฎหมาย ประเทศไทย คือ # พระราม 10 เรา https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/ymDAxejPug
ล้อเลียน: "กษัตริย์ กลัว คน ไทย เจ้า เจ้า เจ้า เจ้า เจ้า เจ้า เจ้า ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก เจ้า เจ้า # พระราม 10 เรา https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/BiKQjhoF1G
การ์ตูน ล้อเลียน: “กษัตริย์ กลัว คน ไทย ไทย เจ้า เจ้า เจ้า เจ้า เจ้า เจ้า ถูก เจ้า เจ้า ถูก ถูก ถูก # เบ อรลิ น เรา # พระราม 10 เรา https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/wSgA3IAqvZ
ฉาย แสง ไป บน # เบ อรลิ นน น น เรียก ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย # ลก ขึ้น สู้ ประชาธิปไตย https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/IOqkBb7fXu
เรา ฉาย แสง การ์ตูน ““ ““ คิง ถูก ฟ้าผ่า ตาย ขณะ นั่ง บน ถูก 112 ช่วย ชีวิต คน ที่ ช่วย 112 ช่วย กฎหมาย คน ฆ่า ประเทศไทย XNUMX คือ กฎหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ฆ่า คน # พระราม 10 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/HwZlpbbRtD
ล้อเลียน ":“ กษัตริย์ กลัว คน ไทย ไทย เจ้า เจ้า ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก ถูก. ที่ # เบ อรลิ น เรา # พระราม 10 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/WjO1tdLxg2
เรา ฉาย แสง การ์ตูน ““ “คิง ถูก ฟ้าผ่า ตาย ขณะ นั่ง 112 รัฐบาล ชีวิต ประเทศไทย ประเทศไทย 112 คือ ชีวิต หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ คือ XNUMX ประเทศไทย กฎหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และ และ คือ # พระราม 10 https://t.co/vLlmuKlbwh # ก ษตริ ย์ มี ทำไม https://t.co/HZs2xYfELQ